Sida loo doorto laptop-ka qaabeynta garaafka 2022 - Creativos Online | Abuurista khadka tooska ah
Jose Angel | | General, Tababarada
Markasta oo aan go’aansano inaan iibsanno laptop cusub, waxaa nagu soo duulay adduunyo shaki badan. Waa macquul. Ma aha in qof walbaa yahay saynisyahan kumbuyuutar ama run ahaantii yaqaan waxa ay u baahan yihiin. Haddii aad tahay ciyaar ciyaar fiidiyoow waxaad u baahan doontaa qeexitaanno qaarkood. Haddii aad u isticmaasho naqshadeynta garaafka, kuwa kale iyo haddii aad maamul tahay, kuwa kale gebi ahaanba way ka duwan yihiin.
Haddii aad u isticmaasho naqshadeynta garaafka waxaad u baahan doontaa awood weyn. Barnaamijka maamulka sida 'Excel' ma la mid noqon doono barnaamijka nashqadeynta garaafyada sida Illustrator. Markaan taas ogaanno, waxaan kordhin doonnaa astaamaha kumbuyuutarkeenna. RAM, Graphics iyo waxyaabo kale sida shaashadda ayaa saameyn ku yeelan doonta. Tani way kici doontaa sidaas kharashka kumbuyuutarka. Waxaan ku soo qaadaneynaa astaamaha laptop-yada qeybahooda kala duwan, iyadoo loo eegayo lacagta aan dooneyno ama aan maal gashan karno. Taasi waa, waxaan sameyneynaa kumbuyuutar ugu yaraan waxqabadka.
Waxaan u soo qaadaneynaa qeybaha ugu muhiimsan qalabka kombiyuutarka loogu talagalay naqshadeynta garaafka. Qaybahan lagama maarmaanka ahi waxay noqon doonaan halka aan ugu yaraan ka gaari karno hogaanka lulaya markay tahay helitaanka laptop wanaagsan. In kasta oo ay cadahay, iyagu waa kuwa leh miisaaniyadda ugu badan.
1 Processor, maskaxda hawlgalka
2 Xusuusta RAM
3 Kaarka GRAPHIC, gabalka aan dhamaanteen raadineyno
4 Hard drive, ka fiican SSD
5 Aalado kale
Processor, maskaxda hawlgalka
Tan ugu muhiimsan, wax kasta oo hareeraheeda ah waa inay xukumaan. Waa inaadan ku kaydin arimahan waana inaanu ku kala doorano curiye sida kaarka sawirada ee aan gadaal ka hadli doono
Way fududahay in lala jaanqaado nidaamka Intel, oo ah processor aad u baahsan. Apple "saaxiib" iyo noocyo badan oo moodello ah. Waxaan ku nuuxnuuxsaday, maxaa yeelay waxaa jira processor-ka AMD, oo 'magac' yar, sidoo kale aad ugu habboon in la isticmaalo.
Dhinacan waxaa jira fikrado kaladuwan. Marka laga hadlayo Naqshadeynta Sawirka, way fiicantahay in la helo processor heer sare ah, sidaa darteed midkoodna wax dhibaato ah kuma siin doono. Halkan dhaqaalaha ayaa faragelinaya. Laptops-ka waxaan caadi ahaan ka helnaa Intel asal ahaan, sidaas raadi laptop oo leh Intel i7 Processor (Jiilka iyo xawaaraha waxay ku xirnaan doonaan sanadka). Iyo uguyaraan jiilkii ugu dambeeyay ee Intel i5 processor, laakiin waa inaan maanka ku haynaa in Intel i9 Processor-ku uu soo baxay, marka sanad kasta oo dhaafa wuu sii dambayn doonaa. Haddii aad ka hesho laptop oo leh processor AMD, hubi inuu yahay AMD Ryzer 7 iyo wixii ka sareeya.
Tirada xudunta iyo wax qabadkooduna sidoo kale waa muhiim. Qaar ka mid ah barnaamijyada iyo shaqooyinka ayaa ka faa'iideysta tiro badan oo diirkja ah, sida kuwa ku lug leh howlaha waxqabadka, halka xaaladaha kale ay ka sii fiican tahay in la yeesho diirkja yar laakiin leh awood badan.
RAM ayaa laga yaabaa inuu yahay curiyaha ugu jilicsan. Anigana waxaan taas u idhi maxaa yeelay uma baahnid nooca ugu fiican. Dhibaatada laptop-ka ayaa ah inay adag tahay in la ogaado nooca RAM. Laakiin haddii ay tahay inaan si fiican isu ogeysiino tirada gigyada iyo xawaaraha MHz ee ay leeyihiin.
Ugu yar ee aan u baahan doono waa 8 GB Xusuusta RAM. Iyo tan ugu badan ee lagu taliyay waa 16 GB. Muddadaas waxaad dooran kartaa 12 GB. Dhammaan waxay kuxirantahay astaamaha laptop-ka. Xawaaruhu waa inuu ahaadaa 1600 Mhz maadaama kuwii hore ay aad u gaboobeen.
Kaarka GRAPHIC, gabalka aan dhamaanteen raadineyno
Markay tahay iibsiga laptop-ka, waxa ugu horeeya ee aan raadineyno waa sumad ku qoran waxa kaarka sawirada aad haysato. Sumaddaas cas ee ka timid AMD ama xitaa cagaarka caadiga ah ee ka yimaada Nvidia. Dadka qaar xitaa way ku qaldan yihiin inay ka fikiraan inay tahay waxa ugu muhiimsan. In kasta oo dabcan ay muhiimad weyn leedahay, haddana haddii aan tixgelinta la siin qodobbada kor ku xusan, wax badan uma qalmo.
Haddii aan eegnay waxyaabihii hore oo aan saxnay, waa inaan eegnaa calaamaddaas. GTX ama RADEON iyo tirooyin aan dhammaad lahayn ayaa ka soo muuqan doona iyaga. Kaarka sawir gacmeedku wuxuu taageerayaa processor-ka si loo dedejiyo ka shaqeynta muuqaalka, iyo inaad yeelato qaab sax ah ayaa naga badbaadin doonta waqti badan, marka waa inaadan iska dhigin doorashadaada
Midka ugu baahsan iyo midka lagula taliyay la jaanqaadkiisa barnaamijyada tafatirka qaarkood waa Nvidia. Xaaladdan oo kale had iyo jeer waxaan u baahan doonaa dhexdhexaad ama heer sare. Takhasuska Nvidia ee Naqshadeynta Sawirka wuxuu abuuray Nvidia Quadro kala duwan. Haddii ay dhacdo in aanaan helin laptob noocaas ah, waxaan raadin doonnaa Nvidia Geforce GTX. Sidan ayaan hubinaynaa in aanaan helin Kaarka Sawirada ee ku dhex jira nidaamkeena.
Hard drive, ka fiican SSD
Miisaanka dhammaan barnaamijyada aad u baahan doonto inaad naqshadeyso waxaa qaadaya disk-ka adag. Laga bilaabo nidaamka qalliinka. Halkani waa meesha ay tahay inaan ku miisaanno xawaare adag oo deg deg ah. Waa wax caadi ah in laga fikiro oo go'aan laga gaaro awood weyn oo adag. Qaar badan oo u dhigma tayada iyo kalsoonida. Dhinaca kale, wax miisaan ah kuma lahan kombuyuutarkeena. Xawaaraha RPM iyo soo gaabinta SSD waa qodobbada ugu saameynta badan ee lagu go’aaminayo mid. In kasta oo ay run tahay in laptop-ka wata HDD uu caadi ahaan xawaarihiisu yahay 5400 rpm, oo ah 7200 rpm ee mid desktop ah. Hard Drive-ka SSD-ka ayaa ka xawaare sareeya kan ka horreeyay ee HDD.
Sidaa darteed way ka qaalisan yihiin waxayna u muuqdaan inay keenaan awood yar. Laakiin awoodda waxaa lagu hagaajin karaa darawalada dibadda. Waa muhiim in marka la rarayo sawirada iyo fiidiyowyada aad u isticmaali doontid shaqadaada naqshadeeye ahaan, tarjumaadda loo sameynayo hab dheecaan leh. Caqabada badan ee kugu haysa inaad fuliso shaqada, waxay sii badineysaa khatarta aad uleedahay in nidaamka uu laalaado oo tirtiro dukumintigaaga.
Waxa ugu haboon ayaa ah in la helo SSD disk yar oo adag oo isku dhafan -128 GB- iyo disk adag oo HDD dibadda ah oo cabbirka aad u baahan tahay.
Mar alla markii aad go'aansato laptop-kaaga. Oo ay ku jiraan dhammaan waxyaabaha kor ku xusan si loo tixgeliyo, Waa muhiim inaad ogtahay in laptop-ka uusan raaxo badan laheyn marka la sameynayo. Ugu yaraan qalabkeeda hooyo - waxaan ka hadleynaa trackpad iyo kiiboodhka asal ahaan-.
Si aad ula socoto, kiniin sida Wacom Graphics Tablets waxay noqon kartaa caawimaad weyn qaabeynta. Haddii aadan weli aad u jeclayn kumbuyuutarradan garaafyada ah, waxaad dooran kartaa jiir iyo kumbuyuutar dibedda ah. Jiirka ergonomic waa muhiim. Nooca kumbuyuutarka wuxuu ku xirnaan doonaa mid kasta dhadhankiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sida loo doorto laptop-ka qaabeynta garaafka
Maqaal wanaagsan oo ku mahadsan faahfaahinta
Maqaal wanaagsan oo ku mahadsan faahfaahinta!
Waxaan bilaabayaa barashada cilmiga badan iyo farshaxanka dhijitaalka ah, waxaan rabaa laptop-ka mana garanayo midka aan dooranayo. Waxaan hayaa xp-pen Deco Pro Para kiniin sawireedka naqshadeynta garaafka Waxaan baarayaa waxa laptop-kayga xiga uu noqon doono (naqshadeynta garaafka iyo howlaha dib u hagaajinta sawirka, gaar ahaan barnaamijyada sida Photoshop, Illustrator iyo Lightroom).
Aad baad u mahadsan tahay!
Ku jawaab javierromera